राप्रपाको राजनीतिक उतारचढाव र भविष्य « News of Nepal
राप्रपाका पूर्वमहामन्त्री सुनिलबहादुर थापा नेपाली कांग्रेसमा किन प्रवेश गर्नुभयो । त्यो उहाँको आन्तरिक विषय हो । तर हामीले भन्नुपर्दा उहाँ राप्रपामा रहनुपथ्र्याे । राप्रपामा रहेरै उहाँले आफ्नो राजनीतिक भविष्य र राजनीतिक उचाइ निर्माण गर्नुभएको थियो । अचानक उहाँ कांग्रेसमा प्रवेश गर्दा हामी आश्चर्यचकित भएका छौं । राप्रपा स्थापना पनि उहाँको पिता पूर्वप्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले नै गर्नुभएको हो । तर आज सुनिलजीले त्यो कुरा बिर्सेझैँ छ । उहाँले पिताकै विरासत थाम्नुपथ्र्याे । त्यसैले राप्रपामै रहनुपथ्र्याे ।
राजनीतिमा आरोह–अवरोह, उतार–चढाव भइरहन्छ । यो कुरा सुनिलबहादुर थापाले बुझ्नुपथ्र्याे । राप्रपामा रहेर उहाँले माथिल्लो पद पनि विगतमा पाएकै हो । अहिले पनि राप्रपाले उहाँलाई उचित स्थान दिएकै थियो । उहाँलाई आफ्नो मातृ पार्टी राप्रपामा पुनः फर्कन म आग्रह गर्दछु । उहाँ पुनः राप्रपामा फर्कनुभयो भने त्यो उहाँको पिताप्रतिको पनि सम्मान हुनेछ । उहाँको स्वर्गीय पिताको आत्मशान्तिसमेत हुनेछ ।
राप्रपाको वर्तमान खिचलो ः
राप्रपामा राजनीतिक, सैद्धान्तिक विषयमा कुनै विवाद छैन । राप्रपाको मुख्य उद्देश्य समवद्र्धनवाद र उदारवाद हो । र, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतामा रहेर पार्टी सञ्चालन भइरहेको छ । यसभित्र सामाजिक न्यायप्रति अग्रगामी विचार लिएकै छ । यसलाई अझ प्रस्ट पार्नका निमित्त पार्टीभित्र गम्भीर छलफल र बहस हुन नसकेको मात्र हो । किनभने यो पार्टी वैकल्पिक प्रजात्रान्त्रिक शक्तिका रुपमा स्थापित हुने क्रममा छ । अहिले मुलुकले वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको माग गरेको छ । त्यसको निमित्त विभिन्न कारणवश राप्रपाबाट अलग भएका हामी अहिले एक ठाउँमा उभिएका छौं । र, हामी नै जनताको चाहनाअनुसार वैकल्पिक शक्तिको रुपमा रहनेछौं भन्ने भविष्यले देखाउनेछ ।
राजनीतिमा आउने र जाने क्रम रहिरहन्छ । जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको नेतृत्व वर्गको कुरा छ, हाम्रो पार्टीको नेतृत्व वर्गमा चाहे राजनीतिक अनुभव, प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यताको आधार होस्, चाहे लोकतन्त्र या गणतन्त्र होस्, यी सबै राजनीतियुक्त अनुभव राप्रपाको नेतृत्वमा छ । राप्रपामा यति बेला कमल थापा, पशुपतिसमशेर राणा र डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी त्रय नेताको तीनखम्बे नेतृत्व छ । अब नयाँ राजनीतिक विचार, उदारवादका साथै समवद्र्धनवादलाई अझै नयाँ उचाइमा पु¥याएर राप्रपा नेपाली समाजमा स्थापित हुनेछ ।
राप्रपाका नेताहरुले राष्ट्रिय मुद्दा उठाउन चुक्नु हुन्न । चाहे कालापानी होस्, चाहे एमसीसी होस्, यी सबै विषयलाई उठाउन राप्रपाका नेताहरु एक कदम अघि सर्नुपर्छ । विगतलाई हेर्ने हो भने राप्रपाले मुलुकका जल्दाबल्दा समस्यामा नेतृत्व लिएको थियो । अब पनि राप्रपाले विगत दोहो¥याउनुपर्छ । विगत र वर्तमान हेर्ने हो भने राप्रपा जनताको पार्टी हो । यसको लागि राप्रपा जनतामाझ जान यस पार्टीका नेता–कार्यकर्ताले अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
त्यसो त मुलुकले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कै नेतृत्वमा बलियो सरकार निर्माण गर्ने सुनौलो अवसर पाएको थियो तर सरकारको नेतृत्वको कारणले यति बेला सत्तारुढ दल नेकपा राजनीतिक किचलोमा ग्रस्त छ । यो अवस्था विकसित भयो भने मुलुकले ठूलो राजनीतिक दुर्घटनाको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । र, यसको निकास राजनीतिक तबरबाटै गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सत्तारुढ दल नै मुख्य जिम्मेवार हुनेछ । देश र जनताप्रति सबैभन्दा पहिला देशको प्रमुख सत्तारुढ दल नै गम्भीर हुनुपर्छ ।
समाधानको बाटो ः
पार्टीभित्र विभिन्न निकायहरु छन् । यसमा संगठन विस्तारका लागि संगठन विभागको ठूलो भूमिका हुन्छ । यसलाई क्रियाशील गर्नु जरुरी छ । यसै गरी विभागहरु तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । दुई पार्टी भर्खर एक हुँदै छ । देशको परिस्थितिले गर्दा पनि पार्टीका सबै अंगहरुले संगठन विस्तार गरी अघि बढाउन सकिरहेको छैन । राप्रपा विभिन्न कालखण्डमा फुट्दै, मिल्दै ग¥यो । यही कारण राप्रपा देशमा उचित स्थानमा पुग्न नसकेको देखिएको छ । त्यसलाई आत्मसात् गरेर देशभक्त बुद्धिजीवी नागरिकहरुलाई यही राप्रपाभित्र ल्याउन फराकिलो राजनीतिक विचार लिएर अब राप्रपा अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।
सानातिना कुरालाई लिएर पार्टीका कुनै निकायमा विवाद हुनुहुँदैन । राप्रपाको सैद्धान्तिक धरातल एउटै हो, विचार एउटै हो भने बारम्बार राप्रपामा किन विवाद हुन्छ ? यो कुराले हामी जस्ता युवाहरुलाई चिन्तित तुल्याउने गरेको छ । विगतमा राप्रपाको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन गर्ने मौकासमेत मिल्यो । देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि राप्रपाका केही नेता सरकारमा सहभागी भए ।
जनताले राप्रपालाई मन नपराएको होइन । विगतको निर्वाचनमा राप्रपा दुईवटा भएर जनतामाझ पुग्यो । त्यस बेला जनतामा कुन राप्रपालाई मत दिने भन्ने दोधार भयो । आज यो कुरा हामी सबैले गम्भीररुपमा स्मरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । तर ढिलै भए पनि राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त) एकीकृत भएको छ । यो एकताले सबैलाई हर्षित तुल्याएको छ । अब आम कार्यकर्तालाई चोट पु¥याउने काम पार्टी नेताहरुबाट हुनुहुन्न । यति बेला राप्रपाको पक्षमा जनलहर छ । राप्रपाको पक्षमा जनतामा उत्साह छ । राप्रपाका सिद्धान्तलाई जनताले आत्मसात् गरिरहेका छन् । अब अर्काे निर्वाचनसम्म राप्रपालाई हाम्रो पार्टी, जनताको पार्टी बनाउनुपर्छ । यो कुरालाई ठूला नेताहरुले बुझेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो ।
मुलुकको राजनीतिक अवस्था ः
मुलुकको राजनीतिक अवस्था चिन्ताजनक छ । यति बलियो सरकार हुँदा पनि जनताको चाहनाअनुसार सरकारले जनताले सोचेजस्तो काम गर्न नसक्दा स्वाभाविकरुपमा जनता निरास भएको अवस्था छ । यसले गर्दा सरकारप्रति जनतामा त्यत्तिकै वितृष्णा पैदा भएको छ । त्यो सरकारकै क्रियाकलापले हो । यस व्रmममा देशमा भ्रष्टाचार, अनियमितताका शृङ्खला जारी छ । ३५ किलो सनुकाण्ड भयो, त्यो सुन कहाँ गयो, जनतालाई देखाउनुपथ्र्यो । यसका अलावा एनसेल काण्ड, तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कतोटाको टेप काण्ड, ललिता निवास काण्डले यसप्रति हामी गम्भीर हुनुपरेको छ । यी काण्डैकाण्डले देश यसरी चलिरहेको छ भनेर निरास हुनुपर्ने अवस्था छ । सरकार यही रुपले अघि बढ्यो भने जनता सहने पक्षमा छैनन् ।
यस क्रममा जुन किसिमको लकडाउन जनतामा लादियो, सरकारबाट व्यावहारिक नभएको यही कोरोनाको कारण देखाएर अझै भ्रष्टाचारमा सरकार डुबेको अवस्था छ । यो मैले मात्र भनेको होइन, जनताको घर–घरमा यो कुरा पुगिसकेको छ । त्यसो त यो लकडाउन हटे पनि कोरोनाबाट सम्पूर्ण नेपाली जनता अझै सजग र सचेत हुनुपर्छ ।
यता हालसालै एउटा प्रमुख मुद्दा उठेको छ, जुन राष्ट्रियतासँग जोडिएको छ । त्यो भनेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूभाग हो । अहिलेको सरकारले उक्त भूभाग नेपालको नक्सामा समावेश गर्ने काम ग¥यो ।
यसमा केपी ओलीलाई सबै नेपालीले धन्यवाद दिनै पर्छ । जति बेला महाकाली सन्धि भयो, त्यति बेला नै कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराको विषयमा आपसमा छलफल गरेर मात्रै महाकाली सन्धि गरिनुपथ्र्याे । त्यसैले त महाकाली सन्धि राष्ट्रघातीको रुपमा नेपाली जनताले लिएका थिए । आज त्यसैको कारण भारतको हेपाहा प्रवृत्ति बढेको छ र नेपालप्रति उसले गिद्देनजरले हेर्दै आएको छ ।
यति बेला नेपालमा जल्दोबल्दो विषय भनेको अमेरिकी नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) प्रमुखरुपमा उठिरहेको छ । यसमा सच्चा देशभक्त नागरिक समाजले घोर विरोध गरिरहेका छन् । सरकारी पक्षको स्वार्थी समूहको सानो झुन्ड भने एमसीसी पास गर्नुपर्छ भनेर जोडतोडले लागेको पाइन्छ । यो पारित गर्न सकिएन भने आकाश नै खस्छ, पताल नै भासिन्छ भन्ने हिसाबले दौडधुपमा व्यस्त रहेको देखिन्छ । यसले राष्ट्रप्रति आँच आउने हो या होइन भन्ने स्पष्ट नभईकन, जनतामाझ नलगीकन एमसीसी पारित गर्न दिनुहुन्न भने धेरैको विचार छ ।
अमेरिकाले एमसीसी छिटो पारित गर्न भनेर नेपाल सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ भन्ने सुनिनमा आएको छ । यस विषयमा उसको ठूलो स्वार्थ छ भन्ने हामी तमाम नेपालीले बुझ्नुपर्छ । एमसीसी इन्डोप्यासिफिकअन्तर्गत हो वा होइन, त्यो पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसअन्तर्गत दस्ताबेजहरु नेपाली जनताले पहिला हेर्न पाउनुपर्छ । एमसीसीबाट गर्ने भनिएको आर्थिक सहयोगको विषय त राम्रै हो तर यो कस्तो किसिमको सहयोग हो व्यापक छलफल हुनु जरुरी छ । अमेरिकाले जबर्जस्ती पास गर भनेर सरकारलाई दबाब दिँदै छ, यसप्रति नेपाली जनता सजग रहनुपर्छ । यस्ता विषयमा राप्रपा सदैव सजग रहनेछ ।
(लेखक कुरुम्बाङ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका युवा नेता हुनुुहुन्छ ।)